Decobond, Gudida Alwaaxdeedka Alwaaxyada Darbiga Gudaha, Gudida Dhagaxa Qoraalka alwaax - Pivot
Pivot waxay leedahay dhowr nooc oo caan ah sida IBOND, Decobond, I-Ceiling iyo sidoo kale I-Micro waxaanan ku takhasustay R&D, waxaan soosaarnaa oo iibinaa dhisme cagaaran oo tayo sare leh & alaabada qurxinta. Maaddaama uu yahay alaab-qeybiye dhammaan xalka loogu talagalay alaabada cusub iyo nidaamka rakibaadda ee dhismaha, qurxinta, calaamadaha iyo warshadaha xayeysiinta, Pivot wuxuu u qaadanayaa hal-abuurnimo aasaaska astaamaha iyo dhaqankeeda.
Dab-u-adkeysiga, Qoyaanka iyo Qoyaanka-Proof, Resistch Scratch, Deegaanka Saaxiibtinimo, Rakibaad Sahal, Bakteeriyada
Shirkadeena waa shirkad farsamo heer sare ah oo heer gobol ah oo ku taal Gobolka Jiangsu. Waxaan haynaa machad cilmi baaris iyo koox farsamo oo ka kooban 30 qof. Shirkaddayadu waxay iskaashi la sameysaa jaamacado badan oo caan ah sida Tsinghua University, Tongji University 、 Jiangnan University iyo Southeast University.
Waxaan ku siin karnaa adeegyo ku saabsan is-habeynta badeecada iyo qorsheynta qotada dheer. Keenistayadu waxay noqon kartaa bil gudaheed waxaanan leenahay hab macaamiil aad u wanaagsan oo lagu maareeyo cabashada.
Naqshadaynta Gudaha Gudaha
Midab leh Aluminium Coll
Emayl: sales@pivotacp.com sales@pivotdecor.com
Shuruudaha adeegsiga iyo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Tilmaamaha - Alaabada kulul - Khariidadda Goobta - Mobileka AMP